OZI - High Uru Holding Fish Games. Hazie Game Software. magburu onwe cabinets.
N'ịkụ azụ Game Mahcine
Fish agbapụ Games
Home » OZI
N'ịkụ azụ Arcade Game Ocean King 3 Plus dajụọ Fire
Fish Hunter Game Ocean King 3 Plus Master nke The Deep
Fish agbapụ Game Software Ocean King 3 Plus Blackbeard oké iwe
Fish Game Ịgba chaa chaa Ocean King 3 Plus Legend nke Phoenix
N'ịkụ azụ Games Ocean King 3 Plus Aquaman n'Ógbè
N'ịkụ azụ Hunter Game Ocean king3 Plus Fire Phoenix
Fish Game Isiokwu Ịgba chaa chaa Ocean eze 3 More Thanos-abọ ọbọ
IGS Arcade Fish Games Ocean eze 3 Plus Dragon Lady of Akụ
Gbaa Egwuregwu Egwuregwu Na Azụ Ocean33 Phoenix Avengers
Site na ha na 2019-12-04 17:12:33
Gbaa Egwuregwu Azụ Egwuregwu Ocean3 Plus Phoenix Avengers Okwu Mmalite nke azụ A na-aga sistemụ - mmezi usoro - ọkwa larịị. Enwere ike ịtọ oti oke a ka ọ dị elu ma ọ bụ obere iji mezie oghere ahụ. Guangzhou Time-Space animation Technology Co., Ltd. n’ofe 20 Ahụmịhe nke afọ na-elekwasị anya na nyocha na mmepe, imeputa na ahia. Anyị na-eme usoro usoro usoro egwuregwu King King na njigide dị elu ma nweta uru ọzọ. Ngwa ahịa anyị gụnyere igwe egwuregwu azụ dinta, igwe azụmaahịa egwuregwu vidiyo egwuregwu, azụ azụ ichu nta nke anụ egwuregwu, Azụ Hunter Arcade egwuregwu, Egwuregwu oghere egwuregwu, Machines ịgba chaa chaa，wdg. Nabata ka ị gbaa anyị ajụjụ.
Tebụl Azụmaahịa Agụụ Ahia Ocean King 3 Gụnyere Dragon Lady nke Akụkụ Akụkụ Akụ Ofufe
Site na ha na 2019-08-22 17:08:08
Anyị bụ ezigbo onye nrụpụta igwe eji egbu azụ na egwuregwu ịkụ azụ. Anyị nwere ọtụtụ ahụmịhe nke azụmaahịa iji nye ndị ahịa ụwa niile ngwaahịa na ọrụ na-eju afọ. Ngwaahịa anyị gụnyere igwe azụ azụ, igwe eji egbu azụ, egwuregwu ịkụ agba azụ, egwuregwu ịchụ nta na ịkụ azụ. Nabata ịkpọtụrụ anyị. Tebụl Azụmaahịa Agụụ Ahia Ocean King 3 Ọzọ, Nwaanyị Dragọn nke Akụ Ahịa - mmezi usoro - ọkwa larịị. Enwere ike ịtọ oti oke a ka ọ dị elu ma ọ bụ obere iji mezie oghere ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere igwe ịchụ nta azụ, egwuregwu ịkụ agba azụ, azụ dinta egwuregwu arcade egwuregwu, igwe na-agba egbe gameetc igwe, wdg, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị.
Igba egbe egwuregwu ịkụ azụ 3 Plus Blackbeard oké iwe
Site na ha na 2019-08-14 10:08:41
Anyị na-emepụta azụ dinta egwuregwu arcade egwuregwu, egwuregwu ịkụ agba azụ, oke osimiri eze azu arcade egwuregwu, wdg. Anyị nwere 10 afọ ahụmahụ na n'ichepụta. Afọ ojuju ndị ahịa bụ ihe anyị na-achụ. Igba egbe egwuregwu ịkụ azụ 3 Nchịkọta iwe nke Blackbeard na - ewebata azù Gaa na sistemụ - mmezi usoro - ọkwa larịị. Enwere ike ịtọ oti oke a ka ọ dị elu ma ọ bụ obere iji mezie oghere ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere egwuregwu osimiri arcade egwuregwu, azụ dinta egwuregwu arcade egwuregwu, wdg, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị.
Ocean King 3 Gụnyere : Ọkụ Na-enwu
Site na ha na 2019-07-24 17:07:28
Anyị bụ ezigbo ndị nrụpụta China. Anyị nwere ike ịnye ọtụtụ ngwaahịa metụtara ngwaahịa, dị ka egwuregwu ịkụ azụ, egwuregwu ịchụ nta azụ, azụ tebụl okpokoro egwuregwu, igwe eji egwu ichu nta, wdg. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ndị a, nabata ịkpọtụrụ anyị! Ocean King 3 Gụnyere Raging Fire bụ egwuregwu azụ ọhụrụ nke agbapụ agbapụ site na TAS. Ocean King 3 Plus Raging Fire bụ ihe kachasị ọhụrụ na Ocean King 3 Ihe n'usoro gbakwunyere na enwere ike ịhazi ya maka ndị egwuregwu 2 ~ 10. Arcade Fish Shooting Games onyeisi: Dragọn Dọpụ Mgbe onye ọkpụkpọ jidere Dragọn ahụ , a ga-atụpụ ụdọ ka o wee jide ya, ọ ga-abanye Ọnọdụ Mgbagide. N'oge ọgụ ahụ, ihe niile mebiri site na dragọn ahụ ga-akụ…
Egwuregwu Tebụl Azụ: Ocean King 3 Plus Blackbeard oké iwe
Site na ha na 2019-07-15 10:07:52
Anyị na-emepụta igwe eji egbu azụ, igwe gbamgbam gbaa egbe, azụ ẹja ẹja ẹphe azụ, oghere igwe, egwuregwu ịchụ nta azụ, wdg. Anyị nwere 10 afọ ahụmahụ na n'ichepụta. Afọ ojuju ndị ahịa bụ ihe anyị na-achụ. Egwuregwu Tebụl Azụ: Ocean King 3 Plus Blackbeard oké iwe: Ọ bụ ihe kachasị ọhụrụ na Ocean King 3 Ihe n'usoro. Ocean King 3 Enwere ike ịhazi iwe iwe Blackbeard maka ndị egwuregwu 2 ~ 10 na tebụl ịkụ azụ Arcade dị iche iche. Blackbeard's Ghost Ship Mgbe onye ọkpụkpọ jidere Blackbeard's Ghost Shipms nke Ghost ụgbọ mmiri ga-akwọ gafere ihe niile na-enyo enyo.. Poseidon Mgbe a na-ejide Poseidon ọtụtụ ebili mmiri nke Poseidon ga-enyere onye ọkpụkpọ ahụ aka inweta ọtụtụ azụ dị ka o kwere mee.. Emperor Crab Mgbe onye ọkpụkpọ jidere Emperor…
mmadụ asatọ na-egwu igwe egwuregwu azụ azụ kacha ọnụ ala
Site na ha na 2019-07-06 11:07:44
Anyi bu ndi n’ere ahia n’igwe n’iile n’iile. Kemgbe e hiwere ya, ụlọ ọrụ ahụ na-agbaso echiche mmepe mmepe na-elekwasị anya na mmepụta nke igwe eji egbu azụ. Companylọ ọrụ ahụ achịkọtala ọtụtụ ndị ọrụ ikike ịkụ azụ maka ọrụ ịkụ azụ nwere ọtụtụ afọ nke ahụmịhe, na-agba mbọ na-enye ndị ahịa ihe kacha mma ngwaahịa na ọrụ-azụ ahịa. Anyi nwere ike inye ndi ahia anyi na ndi okacha amara, ngwọta na ọrụ n'ọtụtụ mpaghara. Akụkụ nke 8 Ndị na-egwu egwuregwu Ocean King Fish Game Machine gụnyere: 1. Egwuregwu Kọmputa kwụsiri ike ihe PCB bụ isi. Njikọ dị nhọrọ: VGA, DVI, HDMI. Mkpu- Cheater I / O bọọdụ. Onye na-ahụ maka ọgụgụ isi 2. Sistemụ arụmọrụ na-anabata ụgwọ ọrụ ICT na-arụ ọrụ maka dollar US 1-100, ụdị ọzọ…
Onye na-ebubata onye na-ere ya ụzọ dị elu
Site na ha na 2019-07-03 18:07:32
Na 1895, Charlie Fey na Jzplay Com chepụtara igwe eji azụ ahịa azụmaahịa mbụ. Ihe mejuputara ya bu uzo ato n’ime ya, oghere a na-arụ ọrụ na mkpụrụ ego, na nkedo ígwè nke na-agbagharị igwe na mpụga. N'oge na-adịghị anya, oghere ndị cha cha ghọrọ ebe ndị isi na-anọ n'ụlọ mkpọrọ, casinos na ọbụna ọtụtụ ụlọ ahịa na-ere ahịa. Ọtụtụ mmadụ nwere nnukwu mmasị na igwe anwansi a na-eme ka ndị mmadụ baa ọgaranya n'otu ntabi anya. N'oge na-adịghị anya igwe ahụ na-emeghe. Ka nkà na ụzụ na-aga n’ihu, ọ banyela n'ụdị dị iche iche. Igwe oghere a bụ ụdị igwe na-agba egwu na mgbanwe. A na-akpọ ya aha n'ihi na ọ nwere mgbawa agba. Igwe ahụ nwere oghere nwere bọọdụ iko atọ nwere usoro dị iche iche. Mgbe adọtara mkpụrụ ego ahụ, mkpanaka ga-amalite…
Ofdị igwe eji egbu azụ
Site na ha na 2019-07-02 16:07:05
Anyị bụ ezigbo ndị nrụpụta China. Anyị nwere ahụmịhe nke azụmaahịa. Anyị na-enye ndị ahịa anyị gburugburu ụwa ngwaahịa na ọrụ nke afọ ojuju. Ngwaahịa anyị gụnyere igwe egwuregwu tebụl ịkụ azụ, egwuregwu akụ egwuregwu egwuregwu , igwe eji egbu azu, wdg. Nabata ịkpọtụrụ anyị. Ofdị igwe eji egbu azụ: 1. Ngwaọrụ platinum kacha ochie A na-ekewa igwe Platinum abụọ, otu bụ igwe platinum dị warara, a na-ejikwa ya na-agbanye ma na-agbanyere ya site na ndọta ahụ sitere na ụdị eriri ahụ. Ihe nke ozo bu EI ma obu EE iron core, tinye mgbakwunye nke emere ka ọ bụrụ ngbanwe iji chịkwaa, akụkụ nke ikpeazụ bụ mmepụta nke onye na - agbanwe ya. 2. Igwe eji igwe Platinum: Platinum Kọmputa…
Njirimara nke azu
Site na ha na 2019-06-29 11:06:58
Fishingzọ ịkụ azụ bụ otu n'ime egwuregwu nkasi obi kachasị mma na ahịa. Egwuregwu a na-eji igwe mmadụ anọ na igwe nwere mmadụ isii maka ọtụtụ mmadụ na-egwu n'otu oge. Ndị na-egwu egwuregwu nwere ike igwu egwu n'ọtụtụ ụdị, bido mejupụta azụ azụ iji merie ụdị azụ dị iche iche na agba dị iche iche na eserese. N'oge egwuregwu, na mgbakwunye na ndị nkịtị ịkụ azụ, enwerekwa obere obere njikọ dị ka super hubka, azụ azụ, igbe pel, super prizes, wdg, iji kpalie akwara nke ọkpụkpọ, na-ekwe ka ndị egwuregwu nwekwuo ọ moreụ na ihe ịtụnanya. Njirimara nke azu： 1. ike di elu, elu ugbua, arụmọrụ dị elu na ịchekwa ike. 2. mba…
18 Jul.2019 Jakarta Indonesia Amusement & Ntụrụndụ Expo, Ebe Ndi Obodo Egwuru Egwuregwu bia
Site na ha na 2019-03-04 15:03:45
Ihe ọchị & Ntụrụndụ Expo, Ebe ndi Gaming Community jikọtara TAS ga - eweta igwe na - eku ume ọhụrụ nke igwe eji egwu azụ na egwuregwu ịgba chaa chaa cha cha & Ntụrụndụ Expo, gbakwunye ngwakọta nke ụdị ndị a ma ama, usoro egwuregwu na-ewu ewu na mmepe ọhụụ na ngwanrọ na ngwanrọ mmemme. Ka anyị bụrụ egwuregwu kachasị elu na ntụrụndụ & Ntụrụndụ Expo.
Peeji 1 nke 212»
Adress: A1201, Heng Gbaa Creative Park, ShiXin Rd, Panyu District, Guangzhou, China
ekwentị: +86 13543475292
Anyị na-agbalị na-enye ndị ahịa na àgwà ngwaahịa. arịrịọ ọmụma,sample & quote,Kpọtụrụ anyị!
Guangzhou Time-Space animation Technology Co., Ltd. © 2021 IKIKE NIILE ECHEKWABARA Usoro ojiji na Nzuzo